Raspberry Pi Multiboot with berryboot – Parrotsec run GNS3 cisco on RaspberryPi – Ubuntu MM
ပထမဆုံး Browser ကနေပြီတော့
berryboot zip file ကို ဒေါင်းပါ
. zip file ကို RaspberryPi မှာ တပ်မယ့် MicroSD ကတ် ထဲသို့ Extrect လုပ်လိုက်ပါ
ပြီးလျှင် Rpi မှာတပ်ပြီး Power onလိုက်ပါ Welcome Screen တက်လာပြီး..ပြီးလျင် ကိုယ်တင်မယ့် OS ရှိတဲ့ USB Flash drive တပ်ထားပါ.. wire or wifi ရွေးပေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ
..Disk Selection နေရာမှာ.. MicroSD Card ကို ရွေးပေးပါ.. ပြီးလျှင် format ကိုနှိပ်ပေးပါ
.. install operation system ဆိုပြီး ပြနေပါလိမ့်မယ်.. အကယ်လို့.. wifi or wire လို့ ရွေးခဲ့တုန်းက internet ရတဲ့ network ဆိုရင် online ကနေ တစ်ခါတည်း download လုပ်ပြီး install လုပ်လို့ရမယ့် OS list တွေပြပေးပါလိမ့်မယ်. ခု ဒို့တွေ လုပ်မှာက offline install လုပ်မှာဖြစ်လို့… cancle ကို နှိပ်လိုက်ပါ…
install complete.Press ‘OK’ to reboot ဆိုပြီးပြနေရင် okay ပေးလိုက်ပါ
boot ပြန်တက်လာရင် Add OS ဆိုတဲ့ Button လေးကို.. ကြာကြာလေးဖိနှိပ်လိုက်ပါ.. Download OS from internet နဲ့ copy OS from USB stick ဆိုပြီး ပြပေးပါလိမ့်မယ်.. Copy OS form USB stick ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ..
Raspberry Pi ရဲ့ USB port မှာတပ်ထားတဲ့ Flash deive မှာ ရှိတဲ့ file တွေကို ပြပေးပါလိမ့်မယ်.. OS.img ဆိုတဲ့ image file လေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ
copying file ဆိုပြီးပြနေပါလိမ့်မယ်…
..နောက်ထပ် ထပ်ထည့်ချင်တာရှိလျင်လဲ ADD OSကနေပြီး ထပ် ထည့်နိုင်ပါတယ်..ပြီလျှင် exit ကိုနှိပ်ပါ.. reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်.. boot တက်လာရင်.. ကိုဝင်ချင်တဲ့ OS ကိုရွေးပြီး Boot ကိုနှိပ်ပါ.. ထပ်ထည့်ချင်သေးရင်တော့ edit menu ကနေတစ်ဆင့် ပြန်ဝင်ထည့်ပါ..
Okay.. ခု Parrotsec မှာ GNS3 ကို install လုပ်ပါ့မယ်.. လိုအပ်တဲ့ dependency တွေ Package တွေ အရင်ထည့်ရပါ့မယ်..
ပထမဆုံး.. gns3-gui နဲ့ gns3-server ကိုထည့်ဖို့ pip3 ကိုလိုအပ်ပါတယ် pip3 သွင်းဖို့အတွက်
$sudo apt-get install python3 python3-pip
– Install GNS3 Python dependencies
$ sudo apt‐get install python3‐setuptools python3‐pyqt4 python3‐ws4py python3‐netifaces
/////github ကနေ clone လုပ်ဖို့ git မရှိသေးရင်
Install Dynmips dependencies
$ sudo apt-get install cmake libelf‐dev uuid‐dev libpcap‐dev
– Build and Install Dynamips
$ git clone git://github.com/GNS3/dynamips.git
$ cd dynamips
$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw=ep /usr/local/bin/dynamips
– Install IOU prerequisites
$ sudo apt-get install bison flex git
$ git clone http://github.com/ndevilla/iniparser.git
$ cd iniparser
$ sudo cp libiniparser.* /usr/lib/
$ sudo cp src/iniparser.h /usr/local/include
$ sudo cp src/dictionary.h /usr/local/include
– Install GNS3 IOUYAP app
$ git clone https://github.com/GNS3/iouyap.git
$ cd iouyap
$ sudo cp iouyap /usr/local/bin/
now We can install GNS3
$sudo pip3 install gns3-gui
လို့ ရိုက်ပြီးသွင်လိုက်မယ်ဆိုရင် latest version( now latest version is 2.0.3) ကိုသွင်းသွားမှ ဖြစ်ပါတယ်
$sudo pip3 install gns3-server==2.0.3
ဆိုပြီးသွင်းမယ်ဆိုရင် version 2.0.3 ကို သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်.. gns3-gui နဲ့ gns3-server သည် same version ဖြစ်ရပါ့မယ်..
ကဲ ခု Terminal ကနေ gns3 လို့ run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ရဦးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး… error လေးနဲနဲ ကျန်ပါသေးတယ်.. ကဲ tshoot လုပ်ကျပါစို.. 😉
PyQt5 ဆိုတဲ့ Module မရှိဘူးလို့ ပြောနေပါတယ်..
sudo apt-get install python-pyqt5
sudo apt-get install qt5-default pyqt5-dev pyqt5-dev-tools
sudo apt-get install pyqt5
ဆိုပြီး PyQt5 module ကိုသွင်းနိုင်ပါတယ်.. command တွေ ကွဲနေရတာကတော့.. Linux distribution မတူရင် ထည့်ပုံထည့်နည်းကွဲနိုင်လို့ပါ…
gns3 လို့ run မယ်ဆို ရဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး.. PyQt5.QtSvg ဆိုတဲ့ module လေးလဲ မရှိသေးပါဘူးတဲ့.. အဲ့တော့ ထည့်ပေးကျတာပေါ့ဗျာ့..
$sudo apt-get install PyQt5.QtSvg
ကဲ $gns3 ဆိုပြီ run ကြည့်ကျပါစို.. ခုတာ့ okay သွားပါပြီး..
cisco ios ထည့်ပြီး idea pc ရွေးပေးလိုက်ပါ..
errorလေးတွေနဲနဲ ရှိပါလိမ့်မယ်.. ubridge ကို /usr/local/bin မှာ ရှာမတွေ့သေးလို့ပါ..
$git clone https://github.com/GNS3/ubridge.git
ခုဆိုရင်တော့ Cisco အတွက်တော့ လုံး၀ ကို အဆင်ပြေပြေ run လိုရသွားပါပြီ.. test အနေနဲ့ ..
R1 နဲ့ R2 ကို ping ပြတာပါ…..
Mikrotik ကတော့ နဲနဲ ပြသနာရှိသေးတယ်ဗျာ့.. နောက်ကျမှ
ဆက်စမ်းတော့မယ်.. see ya!!
Tagged berryboot, cisco, GNS3, multiboot, Parrotsec, RaspberryPi, rpi
Nautilus on Windows 10